Mogadishu Journal » Lionel Messi ayaa doonaya in uu ku laabto Barcelona
Superstar-ka kooxda Paris Saint-Germain ee Lionel Messi ayaa doonaya inuu ku laabto Barcelona ka dib waayihiisii ​​ciyaaraha isagoo ka ciyaarayay booska ka baxsan garoonka isagoo ah xoghayaha farsamada.
Messi ayaa labaatan sano ku qaatay Barcelona, ​​isagoo noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda kooxda, ka hor inta uusan ku biirin PSG ka hor xilli ciyaareedka 2021-22 ka dib markii kooxda ka dhisan LaLiga ay awoodi weyday inay dib ula wareegto xiddiga lixda jeer ku guuleystay Ballon d’Or. xaaladdooda dhaqaale.
Laakiin Messi ayaa muujiyay sida uu u jecel yahay Barca, halkaasoo uu kula guuleystay rikoorka rikoorka ah ee 35 koob, oo ay ku jiraan 10 La Liga iyo afar Champions League.
“Haa, mar walba waxaan dhihi jiray waxaan jeclaan lahaa inaan soo laabto si aan kooxda u caawiyo si walba,” Messi, oo aan weli gool Ligue 1 ah u dhalin PSG, ayaa u sheegay Sport.
“Waxaan rabaa inaan noqdo mid waxtar leh oo aan caawiyo si ay kooxdu u shaqeyso si wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo xoghaye farsamo, laakiin ma garanayo inay noqon doonto Barcelona.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan ku laabto kooxda si aan ugu biiriyo waxa aan awoodo sababtoo ah waan jeclahay [Barcelona], waxaana jeclaan lahaa inay sii wadaan shaqada wanaagsan, inay sii wadaan korriinka iyo inay sii wadaan inay ka mid noqdaan kuwa ugu fiican adduunka."
Messi ayaa ku dhawaaday inuu ka tago Barca 2020 iyadoo lala xiriirinayo Manchester City, PSG iyo Inter, isagoo aan ku qanacsanayn jihada kooxda, iyadoo qandaraaskiisa lagu burburin karo.
Barcelona waxa ay soo martay olole adag tan iyo bixitaankii Messi oo fadhiya kaalinta 9-aad ee horyaalka La Liga, taasoo keentay in la ceyriyo tababare Ronald Koeman.
Kooxda reer Spain ee Barca ayaa 16 dhibcood ka heshay 11 kulan oo ay La Liga ku ciyaartay xilli ciyaareedkan (4 guul iyo 3 bar-baro) – iyaga oo bar-bareeyay bilowgeedii ugu xumaa ee marxaladdan saddexda dhibcood ee xilli ciyaareedka guul (sidoo kale 16 xilli ciyaareed 2000-2001 iyo 2002-03).